Su'aalaha La Weydiiyo - Zhongshan City Jiawang Birta Products Co., Ltd.
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soosaar ballaaran, waqtiga hogaaminta waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta deebaajiga. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heynay ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada bangiga, Western Union ama PayPal:
Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeenna iyo shaqadeena. Ballan qaadkeena waa qanacsanaanta alaabadayada. Caymis ama majiro, waa dhaqanka shirkaddayada in wax laga qabto oo la xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si loo qanco qof kasta
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa xirmooyin dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa kaydinta khatarta khaaska ah alaabada khatarta ah iyo maraakiibta keydka qabow ee la xaqiijiyay oo loogu talagalay alaabada xasaasiga ah. Baakadaha khaaska ah iyo shuruudaha xirxirka aan caadiga ahayn waxay ku imaan karaan lacag dheeraad ah.